कोरोना भाइरस (कोभिड १९) एक परिचय : « Aarthik Sanjal कोरोना भाइरस (कोभिड १९) एक परिचय : – Aarthik Sanjal
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) एक परिचय :
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १७:१०
किशोर शर्मा –
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारी बढेको छ । विश्वको मेडिकल साइन्सलाई नै चुनौती दिने गरी कोरोना भाइरसको महामारी फैलिदा विश्व नै चकित परेको छ ।
चीनको वुहान प्रदेशमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरस कसरी तीन महिना मै विश्वव्यापी भयो कथा रहस्यमय छ ।
चीनको घटना :
१० डिसेम्बर २०१९ को त्यो मघ्य दिन, वुहान सहरको माछा ब्यापारी ५७ बर्षीय महिला मिकु जियान रूघाखोकी र ज्वरोले गाँजेपछि अस्पताल पुगिन् ।
अस्पतालले मौसमी रूघाखोकी र ज्वरोको औषधी दियो । तत्पश्चात उनी फेरि आफनै पसलमा फर्किइन्। तर दूरभाग्य १८ डिसेम्बर २०१९ को त्यो साँझ फेरि उनी बेहोस भएर पसलमै ढलिन् । यो नै कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो घटना थियो। समय आफ्नै गतिमा बित्दै थियो। घटना भएको पनि दुई हप्ता हुन लागिसकेको थियो ।
तर मिकु जियानलाई लागेको रोगको बारेमा केही पत्ता लगाउन सकिरहेको थिएनन्। बरू त्यतिञ्जेल थप ४० जनालाई उहीँ प्रकारको लक्षण र समस्या देखा परिसकेका थियो। तत्पश्चात्, वुहानले यो अज्ञात रोगको बिषयमा WHO लाई सुचना गरायो र ७ जनवरी २०२० मा WHO ले यस अज्ञात नयाँ रोगको बिषयमा पत्ता लगायो ।
डब्लुएचओले यस रोगको नाम 2019- nCOV अर्थात 2019 Novel Coronavirus नाम दियो। जसलाई Coronavirus Disease “COVID 2019” पनि भनिन्छ।
३१ जनवरी २०२० इटलीको रोम शहरमा एकाबिहानै बुहानबाट घुम्न आएका दुई चाईनीज पर्यटकलाई चेकजाँकमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसो सङ्क्मण (COVID 2019) पोजेटीभ देखियो । ईटलीको लागि यो पहिलो केस थियो।
त्यसको ठिक एक हप्तापछि वुहानबाटै फर्केका एक इटालीयनमा पनि COVID 2019 पोजेटिभ देखियो । ३) भारतको घटना: १ मार्च २०२० मा दुबईबाट मुम्बई आएका ५ जना भारतीय नागरिकमा COVID 2019 पोजेटिभ देखियो । भारतका लागि यो पहिलो केस थियो।
नेपालको अर्थात हाम्रो घटना:
२४ जनवरी २०२० जनबरीमा कोरियाबाट आएका एक नागरिकमा COVID 2019 पोजेटिभ देखिन्छ। जो निको हुन्छ । यो नेपालको लागि पहिलो केस थियो । तर पून: २३ मार्च २०२० मा फ्रान्सबाट आएको एक बिधार्थीमा पून: COVID 2019 देखियो। उल्लेखित देशको यथार्थ हेर्दा नेपाल बाहेक माथिका तीनबटै देश, हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न, सक्षम र शक्तिशाली छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दृष्टिकोणले मात्र पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, चीन र भारत स्वास्थ्यमा एशियाकै सबल र सक्षम देश भित्र पर्दछ। त्यस्तै गरि इटली, यूरोपकै उत्तम स्वास्थ्य ब्यबस्था भएको देश हो । तर नेपाल उनीहरू भन्दा धेरै नै पछाडि छ। कोरोना भाइरसको फैलने चरण: कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलाईको आधारमा चार चरणमा बर्गिकरण गरिएको छ।
बिदेशबाट आएकाहरूमा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिने चरण ।
बिदेशबाट आएकाहरूको आफन्त वा उनीहरूको सम्पर्कमा भएकाहरूमा मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ देखिने चरण ।
कहिँ कतै नगएका र बिदेबाट आएकाहरूको सम्पर्कमा पनि नरहेकाहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ देखिने चरण ।
महामारीको चरण । अबस्था: चीन र इटली चौथो चरणमा गुज्रीरहेको छ । भारत तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ । नेपाल पहिलो चरणमा छ।
क)चीन :- भाइरस नयाँ भएको कारण चीनलाई भाइरसको बारेमा थाहा पाउनै झल्डै तीन हप्ता लाग्यो। त्यतिन्जेल यसले तेस्रो चरण पार गरिसकेको थियो।
ख) इटली :- भाइरसको बिषयमा इटलीलाई पूरा जानकारी भैसकेको थियो। इटली चीन धरै दूरीमा छ भन्ने भर्ममा परे । एशियामा फैलिएको हो, यूरोपमा हामी छौं,भन्ने नै इटलीको ठूलो भ्रम सावित भयो।
साथै जनताले पनि सजगता, पूर्व तयारी र सरकारले भनेको कुनै पनि आदेशको सहि पालना गरेनन्। यसकारण इटलीसंग पहिलो चरणमै कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने सामर्थ्य भएता पनि उसको हेलचेक्र्याईं र अनआज्ञाकारीताको कारण पहिलो चरणबाट एकै पटक चौथो चरणमा पुग्नु प–र्यो।
ग) भारत :- कोरोना भाइरसको बिषयमा भारत पूर्ण जानकार छ। यसलाई रोक्न पूर्ण रूपले लागिपरेको पनि छ। तर इटलीको जनताझैं भारतीय जनताको अटेरिपन र हेलचेक्राईं नै भारत तेस्रो चरणमा पुग्नुको कारण बनेको छ।
घ) नेपाल :- भाइरसको बिषयमा पूर्ण जानकार छ। सजगता, पूर्व तयारी र सरकारको आदेश पालन गर्ने हो भने, पहिलो चरणमै भाइरसलाई रोक्न सक्छौं।
बर्तमान परिस्थिति :
चौथो चरण भएर गुज्रिएको चीन र इटलीको कोरोना भाइरस ल्याएको अबस्था वर्णन नै गर्न नसकिने खालकोभयाबह रहेको छ । त्यो तपाईं हामीले सोंचेभन्दा शत प्रतिशत भयानक छ ।
भारतको स्थिती डरलाग्दो बन्दै गएको छ। समीक्षा: हामीलाई दोस्रो र तेस्रो चरणसंग भिड्न धेरै नै गाह्रो हुनेछ। चौथो चरण त परको कुरा हो । त्यसैले हामीले कोरोना भाइरसलाई पहिलो चरणमै हराउनु बुद्धिमानी हुनेछ र यो सोचें भन्दा सजिलो पनि छ। निचोड: क) लकडाउन र कर्फूको पालन गर्ने! ख) घरबाट बाहिर निस्कँदै ननिस्कने! ग) हात धोइरहने! घ) मास्कको प्रयोग गर्ने!
ङ) सहि सुचना लिने र दिने !
च ) भिड र हुलबाट टाढा रहने! ज) खोक्दा, ह्याछिउँ गर्दा मुख छोप्ने !
छ) कोरोना भाइरसको लक्षण देखिए तुरून्त अस्पताल जाने !